အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: သက်တန့်ရောင်စဉ် ယူကလစ်ပင်
19 Responses to “သက်တန့်ရောင်စဉ် ယူကလစ်ပင်”
ယူကလစ်ပင်ရဲ့ ဒီဇိုင်းက အတော်လန်းတာပဲ...၊း)
စုတ်ချက်တွေကလည်း အနု၊ အရင့် စုံလို့...။
ရောင်စုံ အပင်လေး လှလိုက်တာ။ သဲကန္တရ အလယ်က အပင်ကြီးကလည်း လှလိုက်တား) ခရီးက ပြန်ရောက်ရင် မုန့်ဝယ်ခဲ့နော် အစ်မချော။ သတိတရ လာနှုတ်ဆက်လို့လည်း ကျေးဇူးပါ။
ယူကလစ်ပင်တွေအခေါက်ကွာရင် ဖြူဖြူညိုညိုစိမ်းစိမ်းတွေမြင်ဘူးပေမဲ့ ဒီလိုပန်းချီဆန်ပြီးသက်တန့် ရောင်တွေဖြစ်နေတာခုမှမြင် ဘူးတယ်။ သိပ်လှတာဘဲ။
နောက်ဆုိုသတိထားကြည့်ဦးမယ် အဲဒီလောက်အရောင်မစုံရင်တောင် ဘယ်လိုများရှိနေမလဲလို့ ကြည့်ဦးမယ်။
Those Rainbow Eucalyptus are amazingly beautiful, thank you Chaw!!!
ယူကလစ်ပင်တွေရဲ့ အရောင်လေးတွေက လှလိုက်တာ
တခါမှတောင် မမြင်ဖူးဘူရယ် ကျေးဇူးပါ။ သင်္ကြန်အ၀ပျော်ခဲ့နော် :)
အိမ်နားမှာ သစ်ပင်လေးတွေ စိုက်တဲ့ အမတယောက်ရှိတယ်။ သူက ဘလော့ဂ်တွေလည်း ဖတ်ပါတယ်။ သူ့ ပန်းလေးတွေ ပွင့်ရင် ခေါ်ပြရင်း စာရေးတတ်တဲ့သူဆိုရင် ရေးပြီးပြီလို့လည်း ပြောတတ်သေးတယ်။ ဒီက ချောကို သတိရ,ရတာအမော...:)
ဟုတ်ပါ့ ချောရယ် တခါမှ မမြင်ဖူးပါဘူးဟယ်... လှထှာ ဟို အမချစ်ဆွဲထားတာလား ဆိုတဲ့ အပင်က ပိုလှသေး...ဟဟဟဟဟား...၊ "ဘလောဂ့်ရပ်ဝန်းက ပန်းချီ ပညာရှင်တွေ" တဲ့ မြောက်သွားပြီ ချောရေ...ပြန်ကျရင်တော့ အတော် နာမှာဟ....:P
မျှဝေတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ ချောညီမရေ....
မြန်မာပြည်က ယူကလစ်အပင် ကတော့ အဲလို မဟုပ်ဘူး။ မြေဆီစုပ်တယ်၊ မိုးခေါင်တယ်တဲ့။
ကန္တာရထဲက သစ်ပင်ကတော့ အဓိပ္ပါယ်ရှိတယ်။ သဘောကျတယ်။
သဘာဝရဲ့ ထူးဆန်းမှုတွေက အံ့သြဖိုကောင်းလိုက်တာ။
ပြောရရင် ကဗျာ တစ်ပုဒ်လိုပါပဲ..။
ပန်းချီကားတစ်ချပ် အဲ.. စကားလုံးများစွာ
ပြောနေတဲ့ပန်းချီကားတစ်ချပ် ..။
ထီးထီးကြီးဆိုတော့ကိုယ်ဖွဲ့ နွဲ့ကွန့် မြူး
နိုင်သလောက် ရဿတွေ မြောက်တော့ မယ်။
Thanks for your shearing....:D
ယူကလစ်ပင် အဖြူတွေပဲ မြင်ဖူးတာ။ တကယ်ကို အရောင်တွေနဲ့ ထူးဆန်းလိုက်တာ။
တို့လဲ စိတ်ဝင်စားတယ်။ အပင်ကြီးက ရေမရှိပဲ ဘယ်လို အသက်ရှင်?????
အပင်နှစ်မျိုးလုံး ထူးဆန်းနေတယ်။ ယူကလစ်ပင်ရော ကန္တာရထဲက အပင်ရောပေါ့။ ထူးဆန်းပါပေ့ ဆတွတ်ရယ် လို့ ဆိုရမလို ဖြစ်နေပြီ။း)))
မချောရေ မမြင်ဖူးတဲ့ အပင်လေးတွေ မြင်တွေ့လိုက်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ တော်တော်ထူးဆန်းတဲ့ အပင်တွေပါလားနော်။ လှလိုက်တာ ။ ကန္တာရထဲက အပင်ကလည်း အရမ်း သဘောကျဖို့ကောင်းတယ်။ နောက်လဲ ထူးဆန်းတာလေးတွေ တင်ပေးပါဦးနော်။
ကျွန်မတို့ရဲ့ ဆိုက်အသစ်လေးမှာလဲ စာတွေ ဝင်ရေးပေးပါဦးလို့ ဖိတ်ပါတယ်ရှင်။ မြန်မာ အွန်လိုင်းဘလော့ဂ္ဂါများအသင်းပါ MOBA ပေါ့။ ဒီလိပ်စာလေးကနေဝင်ခဲ့ပါနော်။ www.moba4all.org ပါရှင်။ မချော ဝင်ရောက်ကူညီရေးသား ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်အားပါပဲရှင်။ ဆက်ဆက်လာခဲ့ပါနော်။
သဘာဝတရား များ တယ်ဆန်းကျယ်တာပဲနော်...
မချောရေ ယူကလစ်ပင်အရောင်တွေက လှလိုက်တာ၊
သဘာဝတရားကို ဆးခြယ်ကြည့်ရင် လိုက်လို့မမှီဘူး၊
တခါမှ မသိဘူး ယူကလစ်ပင်အရောင်လေးတွေ အဲလိုဖြစ်နေတာ၊ ထူးဆန်းတယ်၊ ယူကလစ်အရွက်အနံ့ ကြိုက်တယ်၊
ဘာရိန်းက အပင်ကြီးက အေဒင်ဥယျာဉ်ကအပင် ဟုတ်ချင်ဟုတ်နေမှာနော် ;) ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ ပါတဲ့ အပင်ပုံစံနဲ့ တော်တော်တူတယ်၊
မချော ကို ရေလောင်းပါတယ်၊ ကချင်မှာဆိုတော့ အေးမယ်ထင်တယ်၊ သပြေရွက်လေးနဲ့ နုနုရွရွလေး ရေလောင်းသွားတယ်နော်
သင်္ကြန်နဲ့ နှစ်သစ်မှာ မချောတို့ မိသားစုအားလုံးပျော်ရွင်ချမ်းမြေ့ပါစေ။